काठमाडौं उपत्यकामा ७ देखि १० दिन निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, कुन-कुन क्षेत्र खुल्दैछन् ? – Nepal Press
स्मार्ट लकडाउन थाहा छैन, निषेधाज्ञा निरन्तर रहन्छ : सीडीओहरु
२०७८ असार ५ गते १९:३६
उपत्यकामा भाइरस संक्रमण उल्लेखनीयरुपमा नघटेकाले जारी निषेधाज्ञाको अवधि थप्ने तयारी भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले बताए ।
‘केही क्षेत्र खुला गरेर निषेधाज्ञालाई थप्ने तयारी गरेका छौं’ सीडीओ पराजुलीले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘हामीले संक्रमणसँगै मृत्युदरलाई पनि विश्लेषण गरेका छौं । पछिल्लो समय मृत्यु घटिरहेको छ र अझै केही समय परिस्थितीलाई हेर्नेछौं ।’
अहिलेको निषेधाज्ञाको अवधि असार ७ गते मध्यरातसम्म कायमै छ । सात गते अगाडि बस्ने काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका तीनै जिल्लाका सीडीओहरुको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गर्नेछन् । साथै, प्रशासनले थप आदेश पनि जारी गर्ने तयारी गरेका छन् ।
के-के खुलाउने तयारी छ ?
‘स्मार्ट लकडाउन थाहा छैन, निषेधाज्ञा निरन्तर रहन्छ’
ललितपुरका सीडीओ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अहिले चर्चामा आएजस्तो स्मार्ट लकडाउनबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘हामीले बुझेको स्मार्ट लकडाउन भनेको अहिलेको भन्दा कडा बनाउने हो’ निरौलाले भने, ‘हामी अहिलेकै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छौं ।’
निश्चित क्षेत्र खुलाएर निषेधाज्ञालाई पनि निरन्तर अघि बढाउने तयारी भएको उनले बताए । ललितपुर सीडीओ निरौलाले पनि ७ देखि १० दिन निषेधाज्ञा थप्ने बारे छलफल चलेको बताए ।
प्रकाशित: २०७८ असार ५ गते १९:३६